Tsigiro - Funlandia
Isu tinopa rutsigiro rwese uye iwe uchafara kuziva kuti isu tiri nyanzvi pazviri.
Iine dhizaini uye R&D timu yevanhu vangangosvika makumi masere, Funlandia inoisa zvigadzirwa pekutanga uye inogadzira zvingangoita chiuru zvemhando yemapurojekiti ezvivaraidzo zveese mazera kubva pazana kusvika gumi㎡.
Isu takagadzira nyanzvi, yakakura uye yakarongeka yekudzidzisa sisitimu yekubatsira vatengi kudzidzisa vashandi vavo vepamberi kuti vawane hang yebasa nekukurumidza.Isu tinoona zvakare kuti zvikwata zvevatengi vedu zvekushanda zvine hunyanzvi hwekuita uye zvinogona kushanda nekukurumidza uye nemazvo.
Zvichienderana nehunhu hwebhizinesi revatengi vedu, isu tinogadzira hurongwa hwebhizinesi chaihwo uye mitemo yekushandisa kune mumwe nemumwe mutengi, tinopa online kushambadzira uye kushambadzira masevhisi kuti tiwedzere pesvedzero yevatengi vedu 'zvichangobva kuvhurwa mapurojekiti munharaunda, izvo zvinobvumira vatengi vedu tanga bhizinesi, tsvaga vatengi vatsva uye chengetedza vekare.
Mumakore 15 apfuura, takaita zvirongwa zvinopfuura 2 000, zvichiita kuti mhuri dzinofara dzinosvika mamiriyoni 20 mumakondinendi matanhatu pasi rose.Panguva imwecheteyo, yakasanganiswa neyakajairwa manejimendi sisitimu uye mazana matatu-vanhu sevhisi timu, isu tinopa vatengi vedu makumi matatu neshanu ekushandisa nzira dzegoridhe kuvabatsira kukwirisa mabhenefiti avo.